Wasiirka Diinta Oo Ka Dayriyay Kufsiga Iyo Tahriibka oo ku soo badanaya Somaliland | Salaan Media
Wasiirka Diinta Oo Ka Dayriyay Kufsiga Iyo Tahriibka oo ku soo badanaya Somaliland
HARGEYSA (SM)- Wasiirka wasaaradda Diinta iyo Awqaafta Somaliland Sheekh Khaliil Cabdilaahi Axmed ayaa shir jaraa’id oo uu maanta ku qabtay xafiiskiisa waxa uu kaga dayriyay kufsiga oo ku soo badanaya dalka iyo tahriibka dhalinyarada oo muddooyinkan dambe kor u soo kacay.
Wasiirka Diinta oo ka hadlayay sida diintu u xaaraantinimaysay sida iyo ciqaabaha ka dhasha, waxa uu yidhi “Waxaan maanta halkan kaga hadlayaa arrimo fool xun oo ay ka mid tahay sinadda oo aad moodo inay faafayso. Sinadu way sii kala fool xun tahaye’ waxa jira ilmo sabi ah oo wax laga dayayo iyo wax la yidhaahdo kufsi wadareed, iyadoo aanay jirin diin iyo dhaqan la ilaalinayo midna.sinadu waa dunuubta ILAAHAY ku halaago umaddaha.ILAAHAY waxa uu yidhi ha u dhowaanina Sinada oo ka fogaada sinada. Waxaan ummadda ku wacyigelinayaa kuna waaninayaa inay ka dheeraadaan oo la suuliyo fool-xumadda sinada.
Wasiirka Diintu waxa uu u mahad celiyay Komishanka xuquuqul insaanka qaranka oo qabtay shir dhawaan ay daboolka kaga qaadeen tiro-koob ay ku sameeyeen kufsiyadii gobolada dalka oo dhan ka dhacay.
Wasiirka waxa kale oo uu ka hadlay tahriibka dhalinyarada Somaliland oo mudooyinkan dambe kor u sii kacay, isagoo arrintaasi ka hadlayayna waxa uu yidhi “Arrinta Tahriibka Wasaaraddu aad iyo aad ayay uga hawl-gashay, waa arrin aafo qaran ah waayo waxa ku baa’baya xoogii iyo dhalinyaradii dalka u soo kacaysay, waana arrin xaaraan ah inaad naftaada biimo geliso.”
“Waxa loo baahan yahay in waalidiintu door weyn ka qaataan oo ay dhalinyarada ka wacyigeliyaan halista tahriibka oo aan loo xaraashin dahabka iyo hantida qoysaska,”ayuu yidhi Wasiirka Diinta iyo awqaaftu.